भिडीयो Archives - Prateek Nepal
मध्यरातमा प्रेमीसँग भागेर काठमाडौँ पुगेर विबाह गरेको विषयमा बाहिरियो यस्तो तथ्य [ भिडियो सहित ]
काठमाडौं । चितवनमा घटेको अनिशा र कञ्चनको घ’टनामा बल्ल प्रहरीले छानबीन गर्ने भएको छ । अनिशाले कञ्चनसंग बिहे गरेपछि कञ्चनलाई चिन्दिन भनेको हुनाले कञ्चनले वि’ष सेवन गरेका थिए । अहिले उनको अवस्था भने अझैं खतरमुक्त भई सकेको छैन । यसै विषयलाई लिएर कञ्चनका परिवारलाई पूरै गाउँलेहरुको समर्थन पनि रहेको छ । तर प्रहरी प्रशासनले […]
रबि लामिछानेको एक फ़ोन कलले सुधिर चौधरीको सातो गएर हिजो देखि गायब (भिडियो सहित )
काठमाडौं । नेपालमा प्रतिनिधिसभा विगठन भई तीव्र राजनी’तिक ध्रुवीकरण देखा परेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अन्तर्वार्ता लिन केही दिन अघि नेपाल आइपुगेको टोली हेलि’कोप्टर चार्टर गर्दै सगरमाथा क्षेत्रमा पुगेको थियो। उक्त स्थानमा लिइएको ‘पिस टु क्यामेरा’मा जी न्यूजका प्रधान सम्पादक सुधीर चौधरीले सगरमाथाको नाम परिवर्तन गरिनुपर्ने र त्यसको अभियान नै चलाउने बताएका थिए। पत्रकारिताका […]
लम्की । कोहलपुरबाट पौष १७ गतेका दिन लम्कि जाँदै गरेका आमा छोरा सवार मोटरसाईकलामा रहेकी आमा नन्दकला थापालाई बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघले लगेको थियो । विहान भएको घटना पछि दिउसो आमाको शरिर चिन्न नसकिने अवस्थामा फेला परेको थियो । केही अंश मात्र फेला परेको थियो । आफ्नै मोटरसाईकलमा बसेकी आमालाई बाघले लैजाँदै गरेको त्यो दृश्य […]
नेपालका चर्चित बिदेशी बुहारीहरु, कसरी नेपालका छोराहरुको प्रेममा परे ? नेपाली फरर बोल्दै यसरी सुनाए प्रेम काहानी……(भिडियो सहित)
December 31, 2020 December 31, 2020 Ramash kunwar
नेपालकै मोटो ब्यक्ती, श्रीमती छिन यति पातली सुन्दरी , यस्तो छ यो जोडीको माया ( भिडियो सहित )
December 30, 2020 Ramash kunwar
काठमाडौँ / सामाजिक सञ्जालमा अहिले अनौठो लाग्ने जोडीहरु निकै भाइरल हुने गरेका छन् । फरक प्रकृतिका ब्यक्तिबीच भएका भएको विवाहलाई सामाजिक सञ्जालमा ल्याएर भाइरल बनाउने ट्रेण्ड चलेको छ । अहिले फेरी सामाजिक सञ्जालमा एक जोडी भाइरल भएका छन् । पति निकै मोटा देखिन्छन् । जसलाई सामाजिक सञ्जालमा नेपालकै सबैभन्दा मोटा भनेर उल्लेख गरिएको छ । […]
रमेश प्रसाईका फ्यानहरुका लागि अहिलेसम्मकै खुशीको खबर,नन्दाको आँखा ठिख हुने ![ भिडियो सहित ]
December 28, 2020 December 28, 2020 Ramash kunwar
काठमाडौं । कालिकोट स्थायी घर भएकी नन्दा सिंह आफैमा एक दृष्टिबिहिन हुन । भर्खरै मात्र चर्चीत वक्ता रमेश प्रसाइ संग विवाह बन्धनमा बाँधिएर अझ बढी चर्चा कमाउन सफल नन्दा संह, २ वर्षको उमेर हुँदासम्म आँखा देख्थिन । तर जब उनलाई दुई बर्षको उमेरमा झाडापखलाले नराम्ररी समात्यो तब उनी धेरै लामो समय सम्म बिरामी भइन । […]
December 27, 2020 December 27, 2020 Ramash kunwar
काठमाण्डौ । श्रीमानले आफ्नै श्रीमतीलाई पि’ट’रै मा’रेको भन्ने समाचारको वास्तविकता खुल्न आएको छ । वास्तवमा श्रीमानले किन श्रीमतीलाई कु टे’रै मा’रे त भन्ने कुरा छलफलमा आउँदा दाश्रो श्रीमतीलाइ बिहे गर्न नपाएको भन्ने आ’रोप यतिबेला मृ’तकका आफन्तले लगाएका छन् । माईती पक्षले त्यस्तो आ’रोप लगाउँदा घर तिरकाले भने बि’रामी भएको हुनाले म’रेको भन्ने स्पष्टिकरण दिएका छन् […]
श्रीमानले बिहे गरेर छाडेपछि,रातको १२ बजे छोरा छाडेर मर्न हिडेकी शर्मिला १ बर्षमै करोडपति,बिगत सम्झेर धुरु धुरु रोइन ( हेरौं उक्त भिडियो )
काठमाडौँ / आमा भन्ने शब्द कति प्यारो हुन्छ त्यो बुझ्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ हो त्यस्तै एक दुखित आमाको कथा आज जोड्दै छौ।धनकुटाकि चेली शर्मिला घिसिङ् सानैमा बैबाहिक जीवनमा बाधिएकी थिईन,१७ बर्षकै उमेरमा बिबाह गरेकी शर्मिलाको पहिलो सन्तान छोरा भयो।पहिलो सन्तान छोरा हुदा निकै खुसि भएकी शर्मिलाको त्यो खुसि १० मिनेट पनि टिक्न पाएन। बिचरा छोरा […]
December 19, 2020 PK
काठमाडौ । ब्यक्तिगत जिवनमा रमाइलो सबै पेशा ब्यवसायका मानिसलाई गर्नुपर्छ । कोरो’नाको क’हरमा सुरक्षाकर्मीको थप महत्व बढेको छ । अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने सुरक्षाकर्मीहरुको पनि ब्यक्तिगत जिवन हुन्छ । उनीहरुलाई पनि रमाइलो चाहिन्छ । यति बेला नेपाल प्रहरीको एक डान्स भिडियो सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भइरहेको छ । भिडियो पुरानो भएपनि अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल […]
खुशी को खबर ! भेटियो सीयोनाको द;’बाई ! बाबाले फेरी बि;न्ति गरे ? के भयो ? [भि;डियो सहित]